Imandarmedia.com: स्वास्थ्यशिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन भनेर नेपाल फर्किए : श्रीजीत श्रेष्ठ
Interview » स्वास्थ्यशिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन भनेर नेपाल फर्किए : श्रीजीत श्रेष्ठ
स्वास्थ्यशिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन भनेर नेपाल फर्किए : श्रीजीत श्रेष्ठ
इमान्दार मिडिया संवाददाता ।
श्रीजीत श्रेष्ठ जसले कक्षा १ देखी थाइल्याण्डको मैडोल बिस्व विद्यालयबाट डिग्री गर्ने बेला सम्मका सबै पढाइहरु स्कलरसिपमा पढे । यो देशमा शैक्षिक क्रान्ति ल्याउने उनको लक्ष्य छ ।
पूर्वाञ्चल बिश्व बिद्यालयको बिषयगत समितिक सदस्य पनि रहेका उनी आफ्नो निम्न आर्थिक पारिवारिक श्रोतका कारण आफुले सोचेको बिषय अध्यन गर्न नसकेका बताउछन् । शिक्षा क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन ल्याउन आफु नेपाल आउनु परेको र बैज्ञानिक शिक्षा प्रणालीमा आफ्नो योगदान हुने उनले बताए ।
युवा जोश र जागरले भरिएका उनले केहि समयमा शिक्षामा परिवर्तन लिएर आउने दृढ संकल्प व्यक्त गरे । त्यसै कारण उनी थाइल्याण्ड छोडेर नेपाल फर्किए र ललितपुरका ४ ओटा कलेजमा लगानी गरी देशमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने अभियानको सुरुवात गरेका छन् ।
हाल एसियन कलेज अफ एडभान्स स्टडीज ललितपुरका प्रिन्सिपल रहेका श्रेष्ठसँग इमान्दार मिडियाले उनको सफल जीवनका उतार चढाब र विभिन्न आरोह अबरोहबारे कुराकानी गरेको छ । हेरौ विस्तृतरुपमा कुराकानीको सम्पादित अंश....
श्रीजीत जी आरामै हुनुहुन्छ ?
आराम छु संघर्षरत जीवन जेनतेन आराम नै हुन्छ ।
निकै व्यस्त हुनुहुन्छ ? के गर्दैहुनुहुन्छ ?
म सामाजिक कार्यमा लागेको व्यक्ति । व्यस्त त हुने नै भइयो । उसो त सबै सामाजिक काम गर्ने व्यक्तिहरु बिजी नै हुन्छन, त्यसमा मैले अहिले ललितपुरका ४ ओटा बिद्यालयहरुको रेखदेख गर्नुपर्छ । एउटा बिद्यालयको प्रिन्सिपलको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको छु ।
त्यसैले अलि बढी नै व्यस्त हुनुपर्ने छ । त्यसमाथि केहि सामाजिक संघसंगठनका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी पनि हुनै पर्यो, त्यसैले अलि धेरै नै व्यस्त छु भन्न मिल्छ ।
कति बर्षको हुनु भयो तपाई ? भन्न मिल्छ ?
मिल्छ नी ! किन नमिल्नु, म अहिले जम्मा ३३ बर्ष भए मैले १९ बर्षको उमेरमा नै कार्यबाहक प्रिन्सिपलको भूमिका निर्बाह गरेको हुँ ।
ओहो निकै युवा नै हुनुहुन्छ, यो उमेरमा नै यति धेरै प्रगति पनि गरिसक्नुभएकाे छ, देशका निम्ति तपार्इले के गर्ने लक्ष्य लिनुभएको छ ?
म समाज विकासका सबै आयामहरुलाई नियाल्दै र अध्यन गर्दै आएको छु । मैले यो देशको शिक्षा प्राणीमा नै केहि परिबर्तन गर्ने सोच बनाएको छु । यदि म त्यो स्थानमा पुगे भने साँच्चै सोचेको जस्तो गर्न सकिन्छ मसँग त्यस्ता केहि अध्यन अनुसन्धान र थुप्रै अनुभवहरु पनि छन् ।
शिक्षा र स्वास्थ्य नै मेरो क्षेत्र भएको हुनाले मैले यो देशमा यहि २ ओटा क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउने लक्ष्य राखेको छु । यो देशको राज्य संचालनको तहसम्म पुगेका नेताहरुले खास - खास क्षेत्रमा दक्षता हासिल गरेका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिदा नै देशका सबै क्षेत्रमा बिकाश हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
तपाईको बिगतबारे केहि कुरा गरौं ?
हुन्छ नी !
माध्यमिक तहभन्दा तलको पढाइ कसरी सक्नु भयो ?
म कमजोर पारिवारिक अवस्था भएको परिवारमा हुर्केको मान्छे हुँ । माध्यमिक तहसम्मको पढाइ पनि मैले स्कलरसिपमा नै पढे । त्यसपछि प्लस २ गर्दा पनि निकै दुख गरेर अध्यन गरेको हो, आफै जागिर खादै आफै पढ्दै गरे ।
म जहिले पनि संघर्ष गर्नुपर्ने परिस्थितिबाट अगाडी बढे । प्लस २ पढाइ सकेपछी मलाइ गाइड गर्ने अभिभाबक खासै कोही थिएन । त्यै पनि निकै मेहनतका साथ पढाइलाई निरन्तरता दिइरहे ।
तपाईले कुन -कुन बिद्यालयमा अध्ययन गर्नुभयो ?
मैले माध्यमिक तहको पढाइ गरेको स्कुल बालकुन्ज माध्यमिक बिश्यालय, पिनाकल उच्च माध्यमिक बिद्यालयमा बायोलोजी/एडीस्नल म्याथ बिषयमा अध्यन, त्रिचन्द्र मल्टिपल कलेजमा बि एससी माइक्रोलोजी, कान्तिपुर कलेज अफ मेडिकल साइन्स एम एससी माइक्रोलोजी, माइडोल युनिभर्सिटी थाइल्याण्डमा एमपीएच पुरा गरेको हु (जहाँ नेपालका निकै कम व्यक्तिले अध्यन गर्ने अवसर पाएका छन् )
माइडोल युनिभर्सिटीमा नेपालबाट कति जनाले अध्ययन गरेका छन् तपाईलाई जानकारी छ ?
जानकारी छ ! पुर्वराजा बिरेन्द्र शाहले त्यहि अध्ययन गरेका हुन् । त्यस्तै पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति लगायत अरु २ जनाले मात्र यो विश्वविद्यालयमा अध्यन गर्नु भाको छ , जति जना यहाँ पढ्नु भो आज उहाँहरु यो देशको गरिमामाय पदमा नै हुनुहुन्छ ।
माइडोल युनिभर्सिटी संसारको कतियौं नम्बरमा पर्छ ? तपाईलाई केहि जानकारी छ ?
थाहा छ, उक्त कलेज मैले त्यहाँ अध्ययन गर्दा तत्कालिन बेला पनि संसारको २७४ औ नम्बरमा थियो ।
तपाईले अध्ययन गरेका यी सबै विद्यालय स्कलरसिपमा नै अध्यन गर्नु भएको हो ?
हो ! मैले सबै विद्यालय स्कलरसिपमा नै अध्ययन गरेको हुँ । पिनाकलमा पनि स्कलरसिप हो । त्यस्तै भारतीय दूताबासले पनि मलाई स्कलरसिपमा स्नातक पढ्ने अवसर पाएँ । त्यस्तै स्नातकोत्तर पनि स्कलरसिपमा नै पढे ।
तपाईले अध्यापन कहिलेदेखि सुरु गर्नु भयो ?
मैले व्याचलर सकेपछी लगातार ७ ओटा विद्यालयमा पढाउने शिक्षकको भूमिका पुरा गरे र सबैभन्दा बढी संघर्ष पनि यहि समयमा नै गर्नु पर्यो ।
त्यसो भए ठ्याक्कै भन्नुपर्दा अहिले कति बर्ष पुरा भयो ?
मैले अध्यापन गराउन सुरु गरेको १३ बर्ष पुरा भइसकेको छ । बिचमा मेरो आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिदा केहि समय छुटेको होला । पछि जब थाइल्याण्डको पढाइ सकेर फर्केपछि लगातार फेरी यहि क्षेत्रमा सकृय भएको छु ।
तपाई सधै टपर नै हुनुभयो । ती क्षणहरु निक्कै खुसीका क्षण भन्नुपर्छ, हामीलाई केहि बताइदिनुहोस् न..
कक्षा १२ को परीक्षा दिएपश्चात एमबिबिएस अन्तर्गतको मिनिस्ट्री टप भए । पैसा कै कारण र सोर्स फोर्स नहुदाँ रसियाको मेरो यात्राले बिराम लियो । मैले नेपालमा नै अध्ययन गरे । दु:ख सुख पढ्दै / पढाउदै आज यो चरणमा आइपुगेको छु। मैले कानुन र शिक्षा सास्त्रमा पनि स्नाकोत्तर गरेको छु ।
अनि तपाईले पढाएका विद्यार्थी पनि टपर नै भए की ?
हो त्यस्तै भन्नुपर्छ । मैले पढाएका विद्यार्थीहरु टपर नै भएर निस्केका छन् । मैले १० कक्षमा जसलाई पढाए उनीहरु टपर नै भए । त्यसपछि मलार्इ पनि एउटा आत्म सन्तुस्टी मिलेको छ र त्यहि आत्म सन्तुष्टिले आजसम्म काम गरेको र उत्साह थपेको छ .....
यो शिक्षा क्षेत्र बाहेक अरु कुनै क्षेत्रमा पनि लाग्नु भयो कि ?
म यो बाहेक अरु क्षेत्रमा लागिन्, पहिला भने मेरो बंगलादेश जाने सोचाई थियो पछि भएन ।
तपाई सुमेरु ग्रुपको कलेजमा पनि जिम्मेवार निकाएमा बस्नु भयो नी हैन ?
हो । मैले सुमेरु ग्रुपको सुमेरु हस्पिटलमा क्याम्पस प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेको छु ।
तपाईका केहि अध्ययन अनुसन्धानका बारेमा बताइदिनुहोस न ?
मैले २००८ मा बिद्यालय जाने बालबालिकामा देखा पर्ने अाउँ, जुका र अन्य सुस्म जीवाणुका बारेमा अध्यन गरेको छु । त्यस्तै २००९ ब्याक्टरियाको संक्रमण र रोगसँग लाग्न सक्ने एन्टीबायोटिकको सक्षमता बारे अनुसन्धान गरेको छु ।
त्यस्तै २०१४ मा सर्जरी गरिसकेका बिरामीमा देखा पर्ने मिथिसिली प्रतिरोधको सुस्म जीवाणु स्टाफाइलोकोकस अरिएसको बारेमा अध्यन गरेको छु । मैले सुस्म जीव विज्ञानमा पनि स्नाकोत्तर गरेको छु ।
Trending : Interview